Sunday May 31, 2020 - 16:34:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dhulalka filasdiin ee ixtilaalka kujira ayaa sheegaya in ciidamada Yahuudda ay toogasho ku dileen qof shacab muslim falasdiini ah kaasi oo ahaa cuuryaan deggan magaalada qudus.
askarta Yahuudda ayaa ruuxa muslimka ay ka toogtay qeybaha sare ee jirkiisa arrinkaas oo dhaliyay in uu durbadiiba geeriyoodo, saraakiisha gaalada yahuudda ayaa dilkan ay ugeysteen 30 sana jirkan cuuryaanka ah sabab uga dhigay iyagoo uga shakiyay in uu lasoo bixi rabay bastoolad si uu ugu geysto weerar.
bayaan kasoo baxay kooxaha muqaawamada falasdiiniyiinta ayay mas'uulkan dilkan dusha uga tuureen bin yamiin netenyaahu R/wasaaraha yahuudda, xukuumada cusub ee Yahuudda ayay ku eedeeyeen in ay durbadiiba lasoo shir tagtay gummaadka ka dhanka ah shacabka aan hubeysnayn ee filasdiin.
Wakaaladda wararka falasdiin ayaa sheegtay in ruuxa muslimka ah ee ladilay lagu magacaabi jiray iyaad kheyri alkhallaaq kaasi oo kasoo jeeda xaafadda lagu magacaabo degmada qadiimiga ah ee magaalada qudusta bari oo yahuuddu ay qabsadeen sanaddii 1967-dii.
kooxaha muqaawamada falasdiiniyiinta ayaa yahuuda ugu goodiyay in ay ka shalayn doonaan dilkan ka dhanka ah ruuxa muslimka ah waxayna carabaabeen in maalmaha soo socda ay yahuuddu waji doonaan aargoosi iyagoo ugu baaqay xukuumadda cusub ee Netenyaahu in ay gacmaha qabato ciidamadeeda.